Kooxda Al-Shabaab oo laga xoreeyey deegaanka Janaa-Cabdala | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Kooxda Al-Shabaab oo laga xoreeyey deegaanka Janaa-Cabdala
Kooxda Al-Shabaab oo laga xoreeyey deegaanka Janaa-Cabdala
iidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Amisom oo Magaalada Afmadow ka baxay saaka ayaa gaaray Deegaanka Janaa-Cabdala oo ah halka kala barta magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow ee gobolka Jubbada hoose.
Degaankaan Janaa- Cabdala ayaa waxaa horey u maamuli jiray kooxda Al-shabaab oo u adeegsan jirtay bar koontarool oo ay canshuurta kaga qaado dadka iyo gaadiidka.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ciidamada horey ugu booriyay inay tagaan degaankaan xilli u shalay tababar usoo xirayay cutubyo katirsan ciidanka Jubbaland oo loo diyaariyay howgallada xoraynta degaanada Shabaab ku maamulaan.
Axmed Madoobe wuxuu ballanqaaday inuu ciidamadan ugu tegidoono jiidaha dagaalka uuna kala qeybgalidoono dagaalka hadday daruuri noqoto waa sida uu yidhi.
Ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federalka ayaa ukala hardamaya sidii uu mid walba gacanta ugu dhigi lahaa dhulka Al-shabaab ku sugan yahay, gaar ahaan degmada Bu’aale oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee isha lgu hayo.
Maqaal horeFaah faahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka Jubbada Hoose
Maqaal XigaCiidamada Danab oo howl-gallo ka wada duleedka degmada Balcad